dog - ဝစ်ရှင်နရီ
၁.၄.၁ အောက်ဆင့် အသုံး
၁.၄.၂ ပေါ်ဆင့် အသုံး
၁.၄.၃ ဆင်းသက်လာသော အသုံး
ဝီကီပီးဒီးယား ပေါ်ရှိ dog
(RP) IPA: /dɒɡ/
အသံထွက် (UK) (file)
(US) IPA: /dɔɡ/
အသံထွက် (US) (file)
(US, Canada, cot-caught) IPA: /dɑɡ/
dog (အများကိန်း dogs)
လူတို့ နှစ်ထောင်းပေါင်းများစွာ မွေးမြူ ထားသော နို့တိုက်သတ္တဝါ A mammal, Canis lupus familiaris, of the genus Canis that has been domesticated for thousands of years, of highly variable appearance due to human breeding.
ခွေးထီး၊ ဝံပုလွေ၊ မြေခွေး၊ - အထီးကိုသာ A male dog, wolf or fox, as opposed toabitch (a female dog, wolf or fox).
(နိမ့်ကျသော) ထိုင်းမှိုင်း၊ စိတ်ဆွဲဆောင်မှု မရှိသော မိန်းကလေး (သို့) အမျိုးသမီး၊ (derogatory) A dull, unattractive girl or woman.
(slang) ယောက်ျားတစ်ယောက် ၊ A man.
(derogatory) သူရဲဘောကြောင်သူ၊ A coward.
(derogatory) အကျင့်ယုတ်ညံ့သူ၊ Someone who is morally reprehensible.
တခု ခုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း-ချည်နှောင်ခြင်း-ဆွဲကိုင်ခြင်း ပြုနိုင်သည့် စက်ထည် (အထူးသဖြင့် အပြင်အသွားရှိ) Any of various mechanical devices for holding, gripping, or fastening something, particularly withatooth-like projection.
စက်သွားနောက်ပြန် ပြန်မလည်ရန် အထောက်-ကန့်လန့်၊ တမ်းပလိတ်:rfc-def A click or pallet adapted to engage the teeth ofaratchet-wheel, to restrain the back action;aclick or pawl. (See also: ratchet, windlass)
မီးထင်း ထိန်းချုပ်သတ္တူ အထောက်၊ A metal support for logs inafireplace.
အသားလုံးချောင်း (ကင်းစားလေ့ရှိ) ၊ A hot dog.
(slang, poker) ညံ့သော (နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လျှင်) Underdog
(slang, almost always, _, in the plural) ခြေထောက် (အများသုံး)၊ feet.
မျှောင်၍ နောက်ယောင်လိုက်သည် ၊
(taxonomic names of animal): Canis familiaris, Canis domesticus, Canis familiarus domesticus, Canis canis, Canis aegyptius, Canis familiarus aegyptius, Canis melitaeus, Canis familiarus melitaeus, Canis molossus, Canis familiarus molossus, Canis saultor, Canis familiaris saultor
(animal): See also Wikisaurus:dog, domestic dog, hound, canine
(man): See also Wikisaurus:man, bloke (British), chap (British), dude, fellow, guy, man
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=dog&oldid=837095" မှ ရယူရန်
အသံလင့်ခ်များ ပါဝင်သော English ဝေါဟာရများ
နမူနာအသုံး ပါဝင်သော အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၃:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။